Igneous, sedimentary र रूपांतरित चट्टानहरु को खनिज रक-निर्मित
चट्टान - चट्टान गठन खनिज अधिकांश पृथ्वी पाप्रो को मुख्य सर्तहरू मध्ये एक छ। सबै भन्दा साधारण क्वार्ट्ज, अभ्रक, स्फतीय, amphibole, olivine, pyroxene र अरूलाई। Meteorites र चंद्र चट्टानहरू पनि, तिनीहरूलाई पर्छ। कुनै पनि रक-निर्मित खनिज पर्छ एक वर्ग वा अर्को - छ भन्दा दस प्रतिशत, माध्यमिक जो मुख्य, गर्न - एक प्रतिशत भन्दा कम - अप दस प्रतिशत, सहायक गर्न। मुख्य कुरा त्यहाँ, आधारभूत हो कि Silicates, टुकडे करो, आक्साइड, chlorides वा sulfates हो।
रक-निर्मित खनिज प्रकाश जस्तै क्वार्ट्ज, feldspathoids, feldspars र जस्तै, र एक गाढा रंग (melanocratic, mafic) olivine, pyroxene, amphibole, biotite र अरूलाई रूपमा (leucocratic, Salic), हुन सक्छ। तिनीहरूले पनि संरचना द्वारा प्रतिष्ठित छन्। रक-निर्मित खनिज सिलिका, कार्रोप्नेट वा हलोजन चट्टानहरु छ। Paragenesis - विभिन्न प्रकारका संयोजन, नाम परिभाषित, को प्रधान भनिन्छ। उदाहरणका लागि, ग्रेनाइट oligoclase, microcline र क्वार्ट्ज संग संयुक्त।
निदान वा symptomatic - रक-निर्मित खनिज, जो स्थान petrographic taxonomy मा रक दिन को एक समूह। यो क्वार्ट्ज feldspathoids र olivine। पनि सम्पूर्ण नस्ल गठन र नस्ल को रूपान्तरण समयमा माध्यमिक निरन्तर syngenetic प्राथमिक खनिज भेद। मुख्य रचना रक-निर्मित खनिज छन् petrogenic भनिन्छ रासायनिक तत्व। हे, एन, एफ, एस, सी, सीएल, मिलीग्राम, फे, ना, CA, सी, अल, कश्मीर छ
खनिज को गुण
क्रिस्टल संरचना र रासायनिक संरचना सबै खनिज को गुण द्वारा निर्धारित छन्। निदान बाहिर छ विश्लेषणात्मक प्रविधी को एक किसिम प्रयोग - वर्णक्रमीय विश्लेषण, रसायन, इलेक्ट्रन माइक्रोस्कोपी, एक्स-रे diffraction। क्षेत्रमा अभ्यास विशुद्ध नेत्रहीन आँखा द्वारा खनिज को protozoa (निदान) गुणहरू निर्धारण। तिनीहरूलाई को भन्दा भौतिक छन्। तर, खनिज को सही परिभाषा निदान विधि को एक सम्पूर्ण दायरा आवश्यक छ। केही गुण फरक खनिज नै हुन सक्छ, जबकि अरु - छैन।
यसलाई यांत्रिक अशुद्धताओं, रासायनिक संरचना र आकार चयन उपस्थिति मा निर्भर गर्दछ। एकदम शायद मुख्य गुण यसलाई सही कुनै पनि पहाड पत्थर निदान गर्न सम्भव छ, त्यसैले विशेषता हो। निदान गुण तीन समूह विभाजित भएको हुन्छ। आफ्नो लागि समूह धन्यवाद को अप्टिकल र यांत्रिक गुण हरेक एक पत्थर लागि गुण को सङ्कल्प अनुमति दिन्छ। तेस्रो समूह - अन्य, निदान विशेष गरी केही खनिज लागि उपयोगी गुणहरू संग।
Monomineral र polymineral नस्ल
रक्स पत्थर - यसको छाल को निर्माण मा भाग लिने, पृथ्वीको सतह कवर एक प्राकृतिक खनिज ठूलो को accumulations। यहाँ भने गरिएको छ रूपमा, पूर्ण पदार्थ को रासायनिक संरचना मा विभिन्न समावेश छ। जसको संरचना ती चट्टानहरू, - monomineral भनिन्छ एक एकल खनिज, र अन्य सबै चट्टानहरु र थप दुई प्रकार को निर्वाचकगण - multimineral। उदाहरणका लागि, चूना - calcite सम्पूर्ण त्यसैले, उहाँले monominerals। तर ग्रेनाइट - विविध। तिनीहरूले क्वार्ट्ज दुवै अभ्रक, र स्फतीय, र यति धेरै फरक समावेश गर्नुहोस्।
Mono- र multimineral जियोलोजिकल प्रक्रियाहरू क्षेत्र मा ठाँउ लिएका छन् जो निर्भर गर्दछ। तपाईं कुनै पनि पहाड पत्थर लिन सक्छ, र सही क्षेत्र, जहाँ यसलाई लिइएको थियो पनि धेरै ठाउँमा परिभाषित गर्न। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य सदृश र एकै समयमा लगभग कहिल्यै नै छ। यी सबै अध्ययन चट्टानहरु छन्। पत्थर धेरै सबै नै हेर्न, तर आफ्नो रासायनिक गुण फरक प्रक्रियाहरू द्वारा गठन गरेका थिए।
पहाड को गठन, sedimentary, रूपांतरित र igneous चट्टानको भेद जसमा अवस्था अनुसार। igneous चट्टानको लागि magma को फुट्ने काम बाट गठन भएको थियो कि एक समावेश गर्नुहोस्। रातो-तातो, पिघला रक, तल ठंडा, एक ठोस क्रिस्टल ठूलो मा गरियो। यो प्रक्रिया हाम्रो दिनमा जान्छ।
को पिघला magma को यौगिकों को धेरै महामण्डल अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद उच्च दबाव र तापमान प्रभावित छन् रासायनिक यौगिकहरु को विशाल संख्या। दबाब सतह गर्न magma वा नजिक जानुहुन्न यसलाई फिट र शांत सुरु गर्न। अधिक गर्मी हराएको छ, अधिक संभावना ठूलो crystallizes। को crystallization दर र क्रिस्टल आकार निर्धारण गर्छ। को ठंडा प्रक्रियाको सतह छिटो छ मा, ग्याँसहरु वाफ बन्नु, त्यसैले ठीक-अन्न पत्थर प्राप्त छ, र गहिराई मा ठूलो क्रिस्टल गठन गर्दै हुनुहुन्छ।
Effusive र गहिरो स्फटिक चट्टानको
सघन magma समूह नाम दिनको दुई मुख्य सुविधाहरूमा विभाजित छ। गहिराई crystallization - magmatic चट्टानको द्वारा effusive समूह, अर्थात् extrusive र हस्तक्षेप समूह भन्छिन्। पहिले नै उल्लेख रूपमा, फरक वातावरणमा ठंडा Magma, र यसैले फरक रक-निर्मित खनिज प्राप्त। Izlivshayasya volatilization ग्याँस केही रासायनिक यौगिकहरु संग सार्थक र अन्य गरिब बन्नेछ। सानो क्रिस्टल प्राप्त छन्। गहिरो magma रासायनिक यौगिकहरु नयाँ छैनन् मा, गर्मी बिस्तारै यसको संरचना मा क्रिस्टल ठूलो हराएको छ, त्यसैले।
Effusive चट्टानहरु पृथ्वीको पाप्रो मा andesites र basalts, तिनीहरूलाई लगभग आधा, rarer Lipari अन्य सबै चट्टानहरु छन् नगण्य छ। गहिरो ज्यादातर porphyry र ग्रेनाइट गठन, तिनीहरूले बीस पटक सबै अरूलाई भन्दा बढी हो। क्वार्ट्ज को संरचना आधारमा प्राथमिक igneous चट्टानको पाँच समूह विभाजित। स्फटिक चट्टानको micro- को एक किसिम र ultramicroelements उल्लेख गर्नुपर्ने बीच अशुद्धियों धेरै समावेश जो बिरुवाहरु को पाप्रो आवरण सबै प्रकारका द्वारा।
को रूप मा Chloro, फ्लोरो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन sulfide, कार्बन र यसको आक्साइड र यति मा, प्लस पानी - magma लगभग सम्पूर्ण आवधिक तालिका तिवारी, ना, मिलीग्राम, K, फे, CA, सी, अल, र अस्थिर घटक को एक किसिम प्रभुत्व समावेश बाफ। को magma सतह सम्म सार्दा हुन्छ, एकदम बाद को संख्या कम गर्छ। विभिन्न सिलिका यौगिकों प्रतिनिधित्व गर्ने एक खनिज - magma सिलिकेट प्रकारका ठंडा मा। लवण silicic एसिड संग - Silicates सबै यस्तो योजना खनिज भनिन्छ। Aluminosilicates लवण aluminosilicate एसिड समावेश गर्दछ।
Basalt magma मुख्य, यो फराकिलोकालागि वितरण छ र आधा, सिलिका हुन्छन् बाँकी पचास प्रतिशत - म्याग्नेसियम, फलाम, क्याल्सियम, एल्यूमीनियम (एकदम), फस्फोरस, टाइटेनियम, पोटासियम, सोडियम (कम) छ। tholeiitic र olivine-धनी basalt alkalis - Basaltic magma सिलिका संग oversaturated विभाजित। Granitic magma - अमिलो, rhyolite, यो मा सिलिका पनि थप अप साठी प्रतिशत, तर घनत्व बढी viscous कम चुस्त र भारी भएको ग्याँसहरु संग संतृप्त छ। Magma कुनै पनि रकम निरन्तर रासायनिक प्रक्रियाहरु को प्रभाव अन्तर्गत विकसित छ।
पृथ्वी पाप्रो को ठूलो को अधिक सत्तरी-पाँच प्रतिशत, साथै सबै ज्ञात खनिज को तेस्रो - यो प्राकृतिक खनिज सबैभन्दा व्यापक वर्ग छ। तिनीहरूलाई को सबै भन्दा - चट्टान बनाउन र magmatic र रूपांतरित मूल। Silicates बनेको हो र sedimentary चट्टानहरु, र तिनीहरूलाई केही मानिस Jewels (उदाहरणका लागि, फलाम सिलिकेट) धातु प्राप्त गर्न अयस्क र खनिज रूपमा उत्पादन गर्दै सेवा गर्छन्।
तिनीहरूले एक जटिल संरचना र रासायनिक संरचना छ। ईओण समूह उपस्थिति द्वारा विशेषता संरचनात्मक ग्रिड tetravalent SiO4- डबल tetraerd। Silicates द्वीप, घन्टी, चेन, बेल्ट, पाना (तहहरू), लास हो। यो अलग सिलिकन tetraerdov को संयोजन मा निर्भर छ।
चट्टानहरु को वर्गीकरण
यस क्षेत्रमा आधुनिक taxonomy को उन्नाइसौँ शताब्दीमा थाले र बीसौँ petrography को विज्ञान, petrology रूपमा ठूलो विकास गरियो। 1962 मा पहिलो उहाँले सोभियत संघ को Petrographic समिति बनाइयो। अब एजेन्सी को मास्को IGEM छ।
माध्यमिक हेरफेर ज्वालामुखी चट्टानहरु को डिग्री दुवै kaynotipnye भिन्न - युवा, परिवर्तन भएको छैन, र palaeotypal - समय खण्डमा संग recrystallized थियो पुरानो। यो ज्वालामुखी चट्टानहरु, को फुट्ने काम समयमा गठन र piroklastitov (टुकडे) समावेश थिए clastic। रासायनिक वर्गीकरण सिलिका सामग्री आधारमा समूह मा विभाजन implies। Igneous चट्टानको संरचना मा, ultrabasic आधारभूत, माध्यमिक, एसिड र अति-एसिड हुन सक्छ।
Batholiths र स्टक
धेरै ठूलो छ, अनियमित आकारको हस्तक्षेप चट्टानहरु को जनता batholiths भनिन्छ। यी formations को क्षेत्र वर्ग किलोमिटर हजारौं द्वारा अनुमानित गर्न सकिन्छ। यो को केन्द्रीय भाग हो जोडेको पहाड, batholiths सारा पहाड प्रणालीमा विस्तार जहाँ। growths, प्रक्रियाहरू र protrusions, granitic magma को परिचय बाट गठन संग भद्दा-अन्न ग्रेनाइट बनेको।
फलामको डण्डाले एक परिपत्र वा अण्डाकार क्रस-शाखागत आकार छ। एक सय वर्ग किलोमिटर भन्दा सामान्यतया सानो कम कहिलेकाहीं - - तिनीहरूले आकार batholith मा साना हुन्छन् दुई सय, तर गुण बाँकी समान छन्। धेरै छड को batholith-जस्तो घरको छानो को वजन देखि protrude। आफ्नो पर्खाल steeply, अनियमित आकृति dipping छन्।
Laccoliths, etmolity, lopolith, dikes
च्याउ वा घरको छानो आकारको गठन भएको viscous magmas द्वारा गठन, laccoliths भनिन्छ। त्यहाँ समूह अक्सर छन्। तिनीहरूले आकार मा सानो हो - व्यास धेरै किलोमिटर सम्म। Magma को दबाब हुर्किने Laccoliths नस्ल, को पाप्रो को layering तोडने बिना उठाएर। मशरूम गर्न धेरै समान। Etmolity विपरीत, टुकी आकारको, पातलो भाग तल। जाहिर छ, साँघुरो खोल्ने उपज magma सेवा गरे।
Lopolith प्वाला आकारको शरीर हो, तल उभडा र किनारा उठायो। तिनीहरूले पनि, पृथ्वीको सतह परेशान बिना जमीन देखि बढ्न देखिन्थ्यो, र यो stretching जस्तै। रक्स ढिलो होस् वा पछि चर्किएको देखिने - विभिन्न कारणहरूले। Magma कमजोरी र दबाब सबै अंतराल र चर्किएको भर्न सुरु भएको भारी तापमान को प्रभाव अन्तर्गत आसपास रक अवशोषित एकै समयमा महसुस। यसरी dikes गठन। सय धेरै मिटरसम्मको आधा मीटर देखि मार्फत, तर पनि छ किलोमिटर पार छैन - तिनीहरूले साना छन्। को magma चर्किएको तल ठंडा रूपमा चाँडै सधैं राम्रो-अन्न संरचना dikes। रक - - हिमालहरू साँघुरो ridges देखेको छ भने यो संभावना छ, dikes, तिनीहरूले वरपरका रक भन्दा क्षरण गर्न थप प्रतिरोधी हो किनभने।
मानव आँखा के हो? आँखा को संरचना
तपाईं शुक्राणु मा साइट्रिक एसिड प्रवेश भनेर थाह थियो?
क्षेत्र आर्कटिक मरुभूमिमा
अमेरिका Toni Tompsonom गर्व हुन सक्छ
के भने डाइभिङ पछि aching कान?
Marinated सिपी मशरूम र अन्य मूल व्यञ्जन लागि नुस्खा
ब्लक हाउस: निर्माण को सुविधाहरू, लाभ र बेफाइदा
बिल Lourens: चलचित्र, जीवनी, व्यक्तिगत जीवन हुन सक्छ